AHOANA NY FAMAFANA IREO SARY REHETRA VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esory daholo ny sary rehetra VKontakte
Indraindray ny tahirin-tsoratadidy MS Word dia mila manampy loharano sasany mba hahatonga azy io ho feno kokoa, tsy hay hadinoina. Io matetika no ampiasaina rehefa mamorona antontan-taratasy Internet, fa afaka manao toy izany koa amin'ny rakitra an-tsoratra tsotra.
Hanova ny rakitra fototra Word
Tombantombana, tsara ny manamarika fa afaka manamboatra ny fototra ao amin'ny Teny amin'ny fomba maro ianao, ary amin'ny tranga hafa dia ny endrika ivelany dia tsy mitovy. Hiresaka bebe kokoa amin'ny tsirairay amin'izy ireo izahay.
Lesona: Ahoana no hanaovana substrate amin'ny MS Word
Safidy 1: Hanova ny lokon'ny pejy
Ity fomba amam-panao ity dia ahafahanao manao pejy amin'ny loko ao anaty ary noho izany dia tsy ilaina ny hoe efa misy soratra. Ny zavatra rehetra ilainao dia azo atao pirinty na ampiana ao aoriana.
Kitiho ny tab "Design" ("Layout Pejy" ao amin'ny Word 2010 sy ny dikan-teny teo aloha; ao amin'ny Word 2003, ireo fitaovana ilaina ho an'izany dia eo amin'ny tabilao "Endrika"), tsindrio ny bokotra eo "Loko Page"any amin'ny vondrona iray "Background Background".
Fanamarihana: Ao amin'ny dikan-teny farany amin'ny Microsoft Word 2016, ary koa ao amin'ny Office 365, fa tsy ny tabilao Design dia tokony mifidy ianao "Designer" - Nanova ny anarany fotsiny izy.
Misafidiana loko mifanaraka amin'ny pejy.
Fanamarihana: Raha tsy mifanaraka aminao ny loko afovoany dia afaka mifidy karazana loko hafa ianao amin'ny fisafidianana "Loko hafa".
Hovana ny lokon'ny pejy.
Ankoatra ny mahazatra "Mena" Afaka mampiasa fomba hafa fanoratana koa ianao, toy ny petra-pejy.
Tsindrio ny bokotra "Loko Page" (vakizoro "Design"vondrona "Background Background") ary sokafy ny singa "Fomba fanao hafa".
Ny fifamezivezena eo anelanelan'ny tabilao, mifidiana karazana pejy izay tianao hampiasaina ho toy ny fototra:
Sary (azonao atao ny mampiditra ny sarinao manokana).
Ny fiavin'ilay pejy dia hiova arakaraky ny karazan-tsafidy nofidinao.
Safidy 2: Hanova ny rakitra ao ambadiky ny lahatsoratra
Ankoatra ny rakitra izay mameno ny faritra manontolo amin'ny pejy na pejy dia azonao atao ny manova ny loko afara amin'ny Teny afa-tsy amin'ny lahatsoratra. Ho an'ireny tanjona ireny dia afaka mampiasa fitaovana roa ianao: "Loko fanovan'ny lahatsoratra" na "Famenoana"izay hita ao amin'ny tablette "Home" (taloha "Layout Pejy" na "Endrika", miankina amin'ny dikan-teny ampiasaina amin'ny programa).
Amin'ny tranga voalohany, ny lahatsoratra dia ho feno ny loko nofidina, fa ny elanelana eo amin'ny tsipika dia hitoetra ho fotsy, ary ny fototra dia hanomboka sy hiafara amin'ny toerana iray toy ny lahatsoratra. Amin'ny faharoa - ny ampahan-tsoratra na ny lahatsoratra manontolo dia ho feno dika-tsokosoko matanjaka izay handrakotra ny faritra voakasik'ilay soratra, fa mifarana / manomboka eo amin'ny faran'ny / ny fiandohan'ny tsipika. Ny famenoana ny iray amin'ireo fomba ireo dia tsy mihatra amin'ny sahan-drakitra.
Ampiasao ny totoo mba hifidy sombin-dahatsoratra iray izay tianao hovana. Ampiasao ireo fanalahidy "CTRL + A" hisafidy ny lahatsoratra rehetra.
Manaova ny iray amin'ireto:
Tsindrio ilay bokotra "Loko fanovan'ny lahatsoratra"any amin'ny vondrona iray "Font"ary misafidiana loko mifanaraka amin'izany;
Tsindrio ilay bokotra "Famenoana" (vondrona "Passage") ary misafidy ny loko feno faniriana.
Azonao atao ny mijery avy ao amin'ny screenshots ny fomba fiovaovan'ireo fomba ireo amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Lesona: Ahoana no hanafoanana ny fototra ao amin'ny Teny ambadiky ny lahatsoratra
Famoahana antontan-taratasy misy dikan-teny novaina
Matetika, ny asa dia tsy hoe manova ny fototry ny rakitra an-tsoratra, fa koa ny hanonta azy any aoriana. Amin'ity dingana ity dia mety misy olana ianao - ny loharano tsy vita printy. Azonao atao ny manamboatra izany toy izao.
Sokafy ny sakafo "Rakitra" ary mandeha any amin'ny fizarana "Masontsivana".
Ao amin'ny varavarankely misokatra dia fidio ilay tab "Screen" ary jereo ny boaty manaraka "Manontania loko sy lamina afak'omaly"hita ao amin'ny sakana safidy "Safidy Print".
mpanao gazety "OK" to close the window "Masontsivana", dia azonao atao ny manonta tahirin-tsoratadidy miaraka amin'ny sary novaina.
Mba hanesorana ireo olana sy olana mety hitranga amin'ny dingan'ny fanontam-pirinty, dia manasa anao hamaky ity lahatsoratra manaraka ity.
Vakio bebe kokoa: Dika printy amin'ny programa Word Word
Izany rehetra izany, amin'izao fotoana izao, fantatrao hoe ahoana no ahafahana mametraka ny fototra ao amin'ny rakitra Pôr ny, ary koa mahafantatra hoe inona ny fitaovana "Fill" ary ny "Color Highlight Color". Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity ianao, dia azo antoka fa hanao ireo antontan-taratasy izay ahafahanao miasa bebe kokoa, mahafinaritra ary mahatsiaro tena.